राष्ट्र लुटेर स्वीस बैंकमा थुप्रो – TajaNepal
Home /Blog/राष्ट्र लुटेर स्वीस बैंकमा थुप्रो
आर्थिकJanuary 23, 2019
राष्ट्र लुटेर स्वीस बैंकमा थुप्रो
काठमाडौं । नेपालका प्रशासक, राजनेता, व्यापारी राष्ट्रघाती हुन भन्दै कसैले आरोप लगाउँदा आक्रोश प्रकट गर्ने मान्छे पाइँदैन । सांसदहरूले आफ्नो स्वार्थका कति नग्न काम गरेछन् त्यसको भण्डाफोर गर्ने पनि प्रेस जगत नै हो । अहिले नेपालमा सम्पत्ति सुद्धिकरण सक्रिय हुन लाग्दा स्वीस बैंक बेलायतमा ५५ जना नेपालीले रु. ५२ अर्ब ७ करोड राखेको समाचार खोतल्ने पनि प्रेस जगत नै हो ।
शासकहरूलाई चित्त बुझेको छैन । उनीहरूका अपराधका बारेमा समाचार आउँदा आक्रोशित हुन सक्छन् । लोकतन्त्रले जनतालाई दिएको उपहार भनेको लुटतन्त्र हो । काँग्रेस र एमाले त लुटहा हुन् भन्ने प्रमाणित भएकै थियो । दश वर्षे जनयुद्धले खारिएका जनताप्रति मोहित बनेका माओवादी नेताहरूको भ्रष्ट चरित्रले नंग्याएको छ । माओवादी नेताका आचरण महल मोह, गाडीको शयर, छोराछोरी विदेश पढाउने प्रतिस्पर्धा मात्रै होइन नेपालमै भएका नेताका छोराछोरी महंगा स्कुलमा निःशुल्क पढाउन लगाउने सहासको परिणत सामान्य विद्यार्थीका अभिभावक माथिको बोझ हुँदै हो । नेताहरू भ्रष्ट र स्वार्थी भएकाले निजी स्कुल र कलेजहरूले सरकारले तोकेको शुल्क लिएर स्तरीय शिक्षा दिलाउन सम्भव छैन भनिरहेका छन् । देशमा ब्रम्हलुट मच्चाएर स्वीस बैंकमा पैसा राख्ने को हुन् ? तिनको भित्रीपाटो पनि अब आउनेछ । प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्पत्ति सुद्धिकरण विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको नियन्त्रणमा त ल्यायो । तर तिनको परिचालन समयअनुकुल गर्न कति सफलता पाउलान् ? अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र प्रम कार्यालय अन्तर्गत नै थिए । यही बेला स्वीस बैंकमा रु ३५ अर्ब ८४ करोड फेला परेको छ । जनयुद्ध भएको बेला भन्दा शान्तिवार्तापछि बैंकमा रकम राख्ने होडबाजी नै चलेको देखियो । वानेश्वरकी मिनु शाह को हुन् जसको नाममा ठूलो रकम रहेको छ । ५५ जना नेपाली कुन स्तरका हुन् । देशमा भ्रष्टाचार गरेर जम्मा गरेको त्यो रकम फिर्ता गराउन कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व लाग्ने कि मौन बस्ने समस्या थपिएको छ । स्वीस बैंकले आफ्ना ग्राहकको सूचना गोप्य राख्छ । पञ्चायत कालमा तत्कालिन रानी ऐश्वर्यको नाममा स्वीस बैंकमा पैसा भएको चर्चा चल्थ्यो । उनको अपमान गर्न पम्फादेवीको हुलिया दिँदै आन्दोलन गर्ने बहुदलवादीहरू १ वर्षमा नांगै भए । देशमा लोकतन्त्र स्थापना भएको १२ वर्षको यो अवधिमा नेताहरू नै बढी बदनाम भएका छन् । हुँदा हँदा सांसदले सुविधाको नाममा पाउने एक अधिकृत, एक खरदार, एक सहयोगीको तलब आफ्नै खातामा कुम्ल्याउन सफल भएको यथार्थता भण्डाफोर भएरै छाड्यो ।
माओवादी शान्ति वार्तामा आएपछि स्वीस बैंकमा पैसा जम्मा गर्ने प्रतिस्पर्धा चलेको रहस्य खुल्यो । विवादास्पद व्यापारी अजय सुमार्गीको बेला बखत शंकास्पद रकम भिœयाइदा राष्ट्रबैंकले आतंकित हुने गर्छ । सुमार्गीलाई नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग जोडेर माओवादी विरोधीहरू समाचार प्रकाशन गर्ने गर्छन् । देशमा शान्ति सम्झौता भएपछि झन् स्वीस बैंकमा पैसा थान्को लगाउन पुगेछन् । बैंकमार्फत् सो रकम फिर्ता गराउने दायित्व सरकारको हो । बैंकिङ कारोबार गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंक हो । राष्ट्र बैंकमा गभर्नरले कालो धनको खोजी गराउन सक्छन् ।
सरकारले राष्ट्रको हित र जनताको सेवा गर्न सकेको छैन । पार्टी नेतृत्व पदभ्रष्ट र सत्ता लम्पट अवस्थामा छ । काँग्रेसलाई मात्र दोष देखाउन सजिलो छ । आचरण र चरित्र कम्युनिष्टको पनि काँग्रेसभन्दा फरक छैन । औंलामा गनिएका स्वार्थीहरूले सत्ता कब्जा गरेका छन् । जनता देखाउने मात्र हो । फाइदा लिने नेताका माफन्त, छोरा–छोरी, सालासाली, भाञ्जाभाञ्जीनै हुन् । जसको राजनीतिमा लगानी हुनु जरुरी छैन ।